Sarintany momba ny haran-dranomasina | Fiaretana haran-dranomasina
Fitaovana fanaraha-maso amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina
Ny drôna an'habakabaka dia manolotra fomba hafa hanaraha-maso ireo tetikasa eo an-toerana. Ny vatohara fanaovana sarintany mampiasa drôna aerial dia mora vidy ary azon'ny rehetra idirana ny teknolojia. Ekipa eo an-toerana dia azo ampiofanina mba hampiasa drôna ary koa hitantana ny fandalinana ny sary. Ny sary drone dia azo ampiasaina hanoritana sarintany ireo vondron-dranomasina, hamoronana andian-dahatsoratra ary hanaraha-maso ny fanovana. Ao amin'ny marivo (latsaky ny 3 m), rano madio, drôna dia azo ampiasaina hanombanana ny fahasamihafana amin'ny haran-dranomasina izay ahafantarana ny zanatany lehibe kokoa sy mahazatra kokoa.
Sarina drone an'habakabaka any amin'ny faritra arovana an-dranomasina any Scotts Head ao Dominica. Sary © Steve Schill
Manome topi-maso vetivety ny rakitsary drone ity horonantsary ity:
Ny Nature Conservancy (TNC) dia nampiasa sary drone hanohanana ny angon-drakitra an-tsokosoko ho an'ny fanaovana sarintany sy ny fampiasana ny haitao drone mba hametrahana sarintany faritra midadasika amin'ny haran-dranomasina amin'ny vahaolana avo be. Amin'ny fampiasana an'ity teknolojia ity, ny zanatany haran-dranomasina tsirairay dia azo soratana sy refesina. Sary an-jatony no voaangona isaky ny iraka ary novolavolaina ho mozika orthofoto.
Niara-niasa ny TNC Fragments of Hope (FoH), ONG iray monina any Belize izay mifantoka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina, manadihady ny fitomboan'ny zanatan-dranomasina nafindra. Vakio ny fandinihana tranga etsy ambany.
Fandalinana tranga: Sombim-panantenaina, Caye vorona mihomehy, Belize
Fragments of Hope dia iray amin'ireo fikambanana mitarika amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara any Karaiba. Miorina any atsimon'i Belize, mifantoka amin'ny famerenana ireo haran-dranomasina amin'ny tandindonin-doza izy ireo Acropora haran-dranomasina Ny fisafidianana ireo zanatan'ny haran-dranomasina izay voaporofo fa mahazaka kokoa amin'ny rano manafana ary miaraka amin'ny fanampian'ny génétika hiantohana ny fahasamihafana, ny FoH dia mivoaka ho any amin'ireo zanatany mandefitra ny hafanan'ny vatohara izay mahazaka famotsiana.
Ekipa mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny akanin-jaza Fragments of Hope Bacalar Chico Marine Reserve. Sary © Sombin'ny fanantenana
Ny valan-javaboary Laughing Bird Caye dia iray amin'ireo tranokala famenoana tranainy indrindra an'i FoH. Hatramin'ny 2006, namoaka sombin-jaza maherin'ny 82,000 izy ireo tao amin'ny haran-dranomasina iray hektara.
Ny fitadiavana fomba hanaraha-maso ny fanovana manerana ny faritra lehibe amin'ny haran-dranomasina voaverina dia sarotra satria ny FoH dia niantehitra betsaka tamin'ny fampitahana ny sarin-tsary andiany anaty rano sy ny mozaika mifototra izay manadihady 50-200 m2.
Vao tsy ela akory izay, ny FoH dia niara-niasa tamin'ny TNC ary nampiasa teknolojia drone handrafetana velaran-haran-haran-dranomasina amin'ny vahaolana lehibe. Ilay drone, DJI Phantom 4 Pro miaraka amin'ny fakantsary 20MP RGB miaraka amin'ny GPS izay manome geotags ireo sary, dia nalefa tamin'ny 90 m ambonin'ny haavo ambanin'ny tany mba hahazoana sary misy vahaolana 2cm. Amin'ny fampiasana an'ity teknolojia ity, ny zanatany haran-dranomasina tsirairay dia azo soratana sy refesina. Sary an-jatony no voaangona isaky ny iraka ary novolavolaina ho mozika orthofoto. Ny fanasokajiana fanaraha-maso mifantoka amin'ny zavatra dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny angon-drakitra an-tsaha sy fanitsiana amin'ny tanana mba hamoronana sarintany amin'ireo zanatany haran-dranomasina.
Mahazo sary drôna ao amin'ny Laughing Bird Caye National Park. Sary © Steve Schill
Ny sari-tany misy valiny 2 sm dia noforonina manondro ny habetsaky ny habakabaka ho an'ny karazany telo amin'ny Acropora nafindra nanomboka tamin'ny 2006, mampiseho ny fitomboan'ny haran-dranomasina sy ny fahombiazan'ny ezaka famerenana amin'ny laoniny.
Sarintany zanatany haran-dranomasina amin'ireo karazany telo Acroporid nafindran'ny Fragments of Hope hatramin'ny 2006. Ao amin'ny volomboasary (ACER) Acropora cerviconis mandrakotra 1932 m2, amin'ny mena (APAL) Acropora palmata mandrakotra 250 m2, ary amin'ny mavo (APRO) Acropora prolifera mandrakotra 52 m2. Sary © The Conservancy voajanahary sy ny sombin'ny fanantenana
Ny valin'ny drôna dia mampiseho fa ireo zanatany nafindran'ny FoH ankehitriny dia mahatratra 20% ny hektara amin'ny vatohara simba. Na dia fanalahidin'ny Fragments of Hope aza ny fahombiazan'ny fahombiazana, ny fiovana marina dia azo jerena anaty rano, izay ahitana ny haran-dranomasin'i Laughing Bird Caye National Park izay mamirapiratra miaraka amin'ny loko.
Talohan'ny (2010) sy aorian'ny (2020) sarin'ny tranokala famoahana ala ao amin'ny Laughing Bird Caye National Park dia mampiseho ny fahombiazan'ny fomba nampiasaina. Sary © Sombin'ny fanantenana